धन्य श्रीमान ! | Narinepal
धन्य श्रीमान !
१३ वर्ष अगाडी बनेपामा तुयुलक्ष्मी शाक्यले बुटिक व्यवसाय सञ्चालन गर्दा काभ्रे जिल्लामा भर यो व्यवसायमा कोहि पनि थिएनन् । त्यसो त हाल सम्म पनि यो व्यवसायबाट काभ्रे उद्योग वाणिज्य संघमा आवद्धता जनाउने एक मात्र अग्रणी महिला उद्यमी हुन उनी ।
उक्त संघमा महिला उद्यमी संयोजक रहेकी शाक्यले सुरुमा दुई लाख रुपैयाँको लगानीबाट यो व्यवसायमा हात हालेकी थिइन् । अहिले करिव १० लाख लगानी रहेको उनको अनुमान छ । व्यवसायीक निरञ्तरता सँगै राम्रो सफलता हाँसील गरेको महँसुस गर्ने उनले आफुले सफलता हाँसील गर्नुमा श्रीमान अशोक रत्न शाक्यको साथनै कारक रहेको ठान्छीन ।
‘मैले श्रीमानको साथ पाएकैले यो सफलता हाँसील गरेको हुँ ।’ उनले भनीन् । ‘प्रत्येक महिलाहरुले मैले जस्तै परिवारको साथ पाँउने हो भने आफ्नो योजना सफल बनाउन सक्छन ।’
बनेपामानै जन्मीएर यहाँनै बिवाह बन्धनमा बाँधीएकी उनले यो व्यवसायमा लाग्ने सोच भने माइतमानै हुँँदा बनाएकी थिइन् । ‘पहिला बनेपामा महिलाको कपडा पुरुषहरुले नै बनाउँथे । महिलाहरुले आफ्नो कपडा आफैले किन बनाउन नसकेका होलान ?’ उनलाई माईतमानै हुँदा यो प्रश्न मनमा उब्जिएको थियो । पुरुषकोमा आफ्नो कपडा बनाउन जाँदा अस्चिलो लागे पछि उनले आफ्नो कपडा आफैले बनाउने सोच बनाईन् । आफुले आफ्नो कपडा आफैले बनाउन सक्दा उनलाई निकै खुसी लाग्यो । अरु मान्छेहरुले पनि आफुले लगाएको कपडा मन पराएको थाहा पाए पछि त झन उनी दङ्ग परीन । एकदिन आफ्नी बहिनी अमराले साथीको बाट सिलाई सिकाउने किताव ल्याए पछि नयाँ–नयाँ ढङ्गका कपडा बनाउन थालीन उनले । माइत छँदानै तुयुलक्ष्मी राम्रो कपडा बनाउन सक्ने भनेर आफु कहली सकेको बताउछीन ।
बिवाह पछि श्रीमानलाई आफु व्यवसायी बन्ने सोचमा रहेको उनले बताईन । श्रीमानले उनको सोचलाई साकार पार्न साथ दिने बचन दिए । उनी खुसी भईन । एक दिन श्रीमानलेनै पत्रिकामा ‘फेसन डिजायन’ सिकाउने सम्बन्धी विज्ञापन आएको र गएर सिक्न भनी दिए । श्रीमानको यो सहयोगको लागी मनमनै धन्यवाद दिदै उनी काठमाण्डौमा रहेको नमुना फेसन डिजाइनीङ इन्सीच्युडमा गएर केहि वर्ष सिप सिकिन । सिपमा पारङ्गत भए पछि बनेपामा ‘अतुषा बुटिक तथा तालिम केन्द्र’को स्थापना गरीन ।
उनले बुटिक खोले पछि विदेशी पर्यटकहरु पनि उनकोमा कपडा बनाँउन थालेको बताउछीन । सुरुमा बनेपा देखी काठमाण्डौ सम्म मात्र उनको बुटिकमा बनेको कपडा गथ्र्याे । हाल उनले ‘डिजायन’ गरको कपडा अमेरीका, इङ्ल्याण्ड, भारत,अस्ट्रेलीया सम्म पुग्ने गरेको उनी बताउछीन ।
‘पहिला आफु बाँचौ त्यस पछि मात्र घर परिवार तथा समाजको बारेमा सोचौ ।’ भन्ने सोच भएकी उनी फुर्सदमा महिलाहरुलाई सिप सिकाउने पनि गर्छन । हाल सम्म दुई सय जनालाई सिलाई सम्बन्धी सिप सिकाएको उनको अनुमान छ ।‘महिलाहरुलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन पाँऊदा मलाई सबै भन्दा बढी खुसी अनुभव हुन्छ ।’ उनी भन्छीन । ‘यदि कोहि सिप सिक्न चाहन्छ र आत्म निर्भर हुन दृढ छ भने पैसा नभए पनि म सिप सिकाउन तयार छु ।’ उनले भनीन । आफुले धेरै पैसा नभएकाहरुलाई पनि सिप सिकाएको र उनीहरुले आफै व्यवसाय समेत सञ्चालन गरेको उनी बताउछीन ।
मान्छे सफल हुन सिप मात्र भएर नहुने उनी बताउछीन ।‘ त्यसको साथमा लगानी गर्ने क्षमता,धैर्यता र परिवारको साथ पनि चाहिन्छ । ’ उनी भन्छिन । ‘महिलाहरुले श्रीमानले कमाई हाल्छन भनेर त्यतिकै बस्नु हुँदैन । कुनै सिप सिकेर आफै आत्मनिर्भर हुनु पर्छ । कम्तीमा आफ्ना साना छोराहरुले–ममि पैसा चाहियो भन्दा कम्तिमा श्रीमान सँग नमागी दिन सकियो भने त्यो जति खुसीको कुरा केहि हुन सक्छ ?’ उनले भनीन ।
संलग्न सँस्था ः १)उद्योग बाणीज्य संघ काभ्रेमा महिला उद्यमी संयोजक
२) प्रगती प्रभात एकेडमी, बनेपा, सञ्चालक समिति अध्यक्ष
३) सिलाई व्यबसायी संघ,काभ्रे उपाध्यक्ष
There are no posts related to धन्य श्रीमान !.